သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း | AnZarTone
by AnZarTone သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း
ဦးဇင်းဘိုခိုင် ကျိန်းစက်နေတဲ့ အခါမှာ လည်ပင်းကို ညစ်လိုက်သလို အသက်ရှုကြပ်လာသလို ခံစားလိုက်ရတာနဲ့ မျက်လုံးကိုလည်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရော မည်းမည်း အကောင်ကြီး တစ်ကောင်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခွဲထားပြီး သူ့လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
ဘုရား သာသနာမှာ ကိုရင် အဖြစ်ကနေ အသက်ပြည့်လို့ ရဟန်း အဖြစ်ကို ပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ သိမ်မှာ သွားပြီး ရဟန်း အဖြစ်ကို သမုတ်ကြရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို မြင့်မြတ်တဲ့ ရဟန်းအဖြစ်ကို သမုတ်ပေးတဲ့၊ ရဟန်း အဖြစ်ကို ရောက်စေတဲ့ သိမ်တော်တွေကို ပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ တနည်းအားဖြင့် သိမ်သမုတ်တဲ့အခါ အခုနောက်ပိုင်း စိတ်ပုတီးတွေကို ထည့်သွင်း ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ လူမျိုးတွေက အထက်က စိတ်ပုတီး လိုမျိုး သိမ်ဝင် ပစ္စည်းတွေကို ဆောင်ထားတဲ့သူဟာ အန္တရာယ်တွေ ကင်းရှင်း စေတယ်လို့ ယုံကြည် လက်ခံထားကြပါတယ်။ သိမ်ဝင် ပစ္စည်းတွေကို အိမ်မှာ ဆောင်ထားရင် မီးဘေး ကင်းရှင်း စေတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သိမ်သမုတ် တာကို ကြုံကြိုက်ဖို့ကလည်း ခဲယဉ်းပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် တင်ပြမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးက သိမ်ဝင် ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ သပိတ်ကွဲပေါ်မှာ နက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဘီလူး အင်းကွက် အသက်ဝင်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ဟာ ဘုရားသာသနာဝင် ရဟန်း တစ်ပါးပင် ဖြစ်လင့်ကစား လောကုတ္တရာ ပညာရပ်ထက် လောကီ ပညာရပ်ကို ပိုပြီး အားသန်တယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။ ဆရာတော်ဟာ ဗေဒင် ပညာကို လေ့လာလိုက်စားတယ်။ အင်းတွေကိုလည်း ရေးတယ်။ ဆရာတော် ရေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အင်းတွေထဲမှာ သူခိုး ဖမ်းတဲ့ အင်းကတော့ အထင်ရှားဆုံးပါပဲ။
ကိုယ် အပြင်သွားစရာ ရှိလို့ အခန်းတံခါးကို သော့ခတ်ထားစရာ မလိုဘူး။ သူခိုးအင်းကို ထားခဲ့လိုက်ရင် ဘယ်သူခိုးမှ မခိုးနိုင်ဘူး။ အဲဒီလောက်ထိ အစွမ်းထက်တယ် …. တဲ့။ ဒါကတော့ သူခိုး ဖမ်းတဲ့ အင်းတဲ့ အစွမ်းထက်ပုံပါပဲ။ ဘီလူးအင်းကိုတော့ နက္ခတ်ကြုံကြိုက်တုန်းမှာ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်က သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲပေါ်မှာ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘီလူးအင်းဟာ ညဘက် ရောက်တာနဲ့ အသက်ဝင်တော့တာပါပဲ။ အသက်ဝင်တယ်ဆိုတာက ညဘက်ရောက်တာနဲ့ ဘီလူးကြီးတစ်ကောင် ရောက်ရောက် တာလာပါပဲ။
ဘီလူးအင်းကို ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ထားတာပါ။ ဘီလူးအင်း ရှိကြောင်းကိုလည်း ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။ ဆရာတော်က အစောင့်အရှောက် သဘောမျိုးနဲ့ ဘီလူးအင်းကို ရေးခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘီလူးအင်း အကြောင်းကို သိဖို့အတွက် ဖန်တာလာတဲ့ အဖြစ်က ဒီလိုပါ ။
တစ်ခါက ဆရာတော်ဟာ အရေးကြီး ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ မြို့ပေါ်ကို တက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆရာတော်ရဲ့အောက် ဝါအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးက ဆရာတော် ကျိန်းစက်တော်မူတဲ့ အခန်းထဲမှာ ဝင်ပြီး ကျိန်းစက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီ ရဟန်းကို ကျွန်တော်တို့ ရွာကလူတွေက ဦးဇင်းဘိုခိုင် လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ငယ်နာမည် ဘိုခိုင်ကို အစွဲပြုပြီး ဦးဇင်း ဖြစ်တဲ့အခါ ဦးဇင်းဘိုခိုင် လို့ ခေါ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဘိုခိုင် က အကြောက်အရွံ့ မရှိတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်ဖို့ မရဲကြပါဘူး။ မဝင်ရဲခြင်းရဲ့ အကြောင်းကလည်း ဆရာတော်ကို ကြောက်ခြင်းထက် ဆရာတော်ရဲ့ အင်းတွေကို ကြောက်လို့၊ ဆရာတော်ရဲ့ လောကီ ပညာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးကြောက်လို့ ပါပဲ။
ဦးဇင်းဘိုခိုင် ဟာ ဆရာတော် မရှိတာနဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းတွင်း ဝင်ရောက် ကျိန်းစက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညက ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားတွေ အိပ်တာ များတဲ့အတွက် ဦးဇင်းဘိုခိုင်က သူ့နေရာကို အခြား ဦးဇင်းတစ်ပါးကို ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဆရာတော် အခန်းတွင်း ဝင်ရောက် ကျိန်းစက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဘိုခိုင် ကျိန်းစက်နေတဲ့ အခါမှာ လည်ပင်းကို ညစ်လိုက်သလို အသက်ရှုကြပ်လာသလို ခံစားလိုက်ရတာနဲ့ မျက်လုံးကိုလည်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရော မည်းမည်း အကောင်ကြီး တစ်ကောင်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခွဲထားပြီး သူ့လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
ဦးဇင်းဘိုခိုင်ကလည်း ကြောက်တတ်တဲ့လူ မဟုတ်တော့ အဲဒီ အကောင်ကြီးကို ပြန်ချပါတော့တယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ တဝုန်းဝုန်း၊ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ အသံတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီ အသံတွေကြောင့် အိပ်ပျော်နေကြတဲ့ ဦးဇင်းတွေ၊ ကိုရင်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေ နိုးလာပြီး ဆရာတော် အခန်းဆီကို ပြေးကြပါတော့တယ်။ အခန်းတံခါးကို ဝုန်းခနဲ ဖွင့်လိုက်တော့ အကောင်ကြီးကို မတွေ့တော့ဘဲ ဦးဇင်းဘိုခိုင် ကိုသာ တွေ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီညအဖို့ ဦးဇင်းဘိုခိုင်လည်း အခန်းထဲမှာ ထပ်ပြီး မကျိန်းစက်တော့ဘဲ အပြင်မှာပဲ ကျိန်းစက်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်လည်း မိုးလင်းရော ဦးဇင်းဘိုခိုင် တစ်ယောက် အကျိုးအကြောင်းကို စုံစမ်းပါတော့တယ်။ ဆရာတော် ကလည်း မရှိတော့ ကျန်တဲ့ ဦးဇင်းတွေ၊ ကိုရင်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေကို မေးရတာပေါ့။ အဲဒီလို မေးတဲ့အခါ ကိုရင်တွေထဲမှာ ဥာဏ်လျင်ပြီး၊ ပါးပါးနပ်နပ်ရှိတဲ့ ကိုရင်ပေသီး က ပြောပါတယ်။ တပည့်တော် တစ်ညက ဆရာတော် ရွာကြွသွားတဲ့အခိုက် အခန်းထဲ ဝင်ပြီး ထန်းလျက်ခဲ ခိုးစားဖို့ ချောင်းတုန်းက အဲဒီ အကောင်ကြီးကို မြင်ဖူးခဲ့ကြောင်း၊ ဆရာတော်ကို အကောင်ကြီးတွေ အကြောင်းကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးလျောက်တုန်းက ဆရာတော်မှ အဲဒါ ဘီလူးအင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဦးဇင်းဘိုခိုင် ကို ကိုရင်ပေသီးက လျောက်ထားပါတယ်။
ဦးဇင်းဘိုခိုင်က အကြောင်းလည်း သိရော ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းကို ဝင်မွှေပါတော့တယ်။ ဘီလူးအင်း ကို လိုက်ရှာတယ်။ အင်းအကြောင်းကို ဆရာတော်ဆီက သင်ယူနေတဲ့ ဦးဇင်း တစ်ပါးရဲ့ အကူအညီနဲ့ သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနဲ့ ရေးထားတဲ့ ဘီလူးအင်းကို တွေ့သွားပါတော့တယ်။ ဘီလူးအင်းကိုလည်း တွေ့ရော ဦးဇင်းဘိုခိုင် က ညက သူ့ကို နှိပ်ကွက်ခဲ့တဲ့ အငြိုးတွေနဲ့ ဘီလူးအင်းကို လက်စားချေဖို့ လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ ဆရာတော် ပြန်လာရင်တော့ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် လျောက်ပြလိုက်မယ်၊ အခုတော့ ဒင်းကို နုတ်နုတ် ဆင်းပစ်လိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ဘီလူးအင်းချပ်ကို ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ထောင်းပြီး ‘ကဲ … ငါ့ကို နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ဘီလူး သွားပေတော့’ ဆိုပြီး ကြေညက်သွားတဲ့ ဘီလူးအင်းချပ်ကို ကျောင်းရဲ့ အပြင်မှာ မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီညအဖို့ ဦးဇင်းဘိုခိုင် ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းတွင်း ဝင်ပြီး ကျိန်းစက်ခဲ့ပေမယ့် အကောင်ကြီး ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့၊ အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဘီလူးအင်း ဟာ ဦးဇင်းဘိုခိုင်ရဲ့ လက်စွမ်းကြောင့် မြေအောက် ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း ခရီးက ပြန်ရောက်ရော ဦးဇင်းဘိုခိုင်က ဘီလူးအင်း ကို ဖျက်ဆီး ပစ်လိုက်ကြောင်း လျောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆရာတော်က “အင်း … ကိုယ်တော်က တပည့်တော် အခန်းထဲ ဝင်ကျိန်း ခဲ့တာကိုး။ အဲဒီ ဘီလူးက တပည့်တော် မဟုတ်တော့ ကိုယ်တော့်ကို ရန်မူတော့တာပေါ့။ ကိုယ်တော် မကြောက်တတ်လို့ တော်ရော့တယ်။ နို့မဟုတ် ကိုယ်တော် သေနိုင်လောက်တယ်။ အေးကွယ် .. ကိုယ်တော်လို လူမျိုးကို သွားပြီး ရန်စတာဆိုတော့ အင်း … ဘယ်လို ပြောရလဲ။ ကောင်းပါတယ်ပေါ့ …” ဟူ၍ ဆရာတော်က ဦးဇင်းဘိုခိုင်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာတော်ဟာ ခရီးထွက်တိုင်း အခန်းတံခါးကို သော့ခတ်ထားခဲ့ပြီး သော့ကိုပါ တစ်ပါတည်း ယူသွားတဲ့အပြင်၊ ဘယ်သူမှ သူ့အခန်းတွင်း မဝင်ရန် အမိန့်တော် ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါကတော့ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲပေါ်မှာ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး နက္ခတ်လည်း ကြုံကြိုက်ခဲ့လို့ အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဘီလူးအင်း အကြောင်း ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့အတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘီလူးအင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ ဟိုးဟိုးကျော်သွားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ် ………… ။
ဒီ Post ကတော့ ပို့စ် အဟောင်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ …။
မဖတ်ဖူးသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင်လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း Link : http://mandalaygazette.com/97880/creative-writing
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged ဘီလူး, မဟာရာဇာ အံစာတုံး, သရဲ. Bookmark the permalink.
← ချစ်လို့ ရူးခဲ့မိပါသည် ……။	တောင်ပေါ်က တယောသံ →
One thought on “သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း”	ရှမ်းကြီး July 14, 2013 11:07 am ဒါမျိုးလိုချင် လိုက်တာငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ကုလားတွေ ကိုပေးတွေ့ချင် လို့ဒါဆိုငါတို့ကုလားကိုရိုက်စရာမလိုတော့ဘူး မဟုက် ရင် ရဲကိုကို တို့ကတခြား အမှု့ဆိုဖမ်းချင် မှဖမ်းတာကုလားထိရင် အချိန်နဲ့တ ပြေညီဖမ်းရောပဲ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြ မှာတွေ့တာမဟုက်ဘူး ကုလားက ခြ င်္သေ့နဲ့ ဆင် ရဲနဲ့ပေး တွေ့လိုက်တော့ ငါတို့ဗမာတွေ အချုပ်ခန်းနဲ့အာမခံပေါ့